Ilay voampanga farany noho ny halatra sary avy amin'ny iCloud ho an'ny olo-malaza voaheloka higadra 8 volana | Vaovao IPhone
Voampanga farany noho ny halatra ny sarin'ireo olo-malaza iCloud voaheloka higadra 8 volana
George Garafano, iray amin'ireo efatra voasambotra noho ny halatra sary iCloud avy amin'ireo olo-malaza isan-karazany tamin'ny 2014 ary nozaraina tao amin'ny Internet taty aoriana, voaheloka higadra 8 volana an-tranomaizina. Garafano dia nampangaina ho nandika ny kaonty iCloud olona mihoatra ny 200 tao anatin'ny 18 volana, anisan'izany ny an'ny olo-malaza sasany, noho izany ny maha-zava-dehibe ny lazany sy ny lazany.
Ny mpitsara federaly Connecticut dia nanome baiko ny fanagadrana an'i Garafano mandritra ny 8 volana, ankoatry ny fanaraha-mason'ny manam-pahefana 3 taona taorian'ny namoahany ny saziny. Aprily lasa teo Niaiky ny helony i Garafano noho izy nandefa mailaka phishing, miseho ho mpikambana ao amin'ny ekipan'ny Apple fiarovana mba hahazoana anarana sy tenimiafina.
Nandritra io raharaha io dia nilaza ny mpampanoa lalàna fa natakalon'i Garafano tamin'ny hacker hafa ny sasany tamin'ireo sary nangalarina ary izy koa, mety nivarotra ny sasany tamin'izy ireo mba hahazoana fidiram-bola fanampiny, na dia tsy voaporofo aza ity farany. Nangataka sazy 10 hatramin'ny 16 volana an-tranomaizina ireo mpampanoa lalàna, fa ny mpisolovava kosa nangataka sazy 5 volana, ary narahina fonja dimy volana.
Efatra no olona voampanga ny fidirana amin'ny kaonty iCloud mampiasa phishing miaraka amin'ireo voaheloka farany: Ryan Collins, Edward Majerczyk ary Emilio Herrera. Ireo rehetra ireo dia voaheloka higadra 9 hatramin'ny 18 volana an-tranomaizina.
Raiso ity karazana mailaka ity, indrisy fa mahazatra izany, ary tsy hoe Apple fotsiny no nandefa azy, fa ny banky koa. Ireo mailaka ireo dia miaraka amina rohy izay manome antsika endrika mitovy amin'ny atolotry ny orinasa izay amin'ny teoria no nandefa azy. Raha tsindrio eo izany ary ampidirintsika ny angon-drakitra fidirana, dia omentsika ny olona tsy fantatra izany, ireo olona izay afaka miditra ao amin'ny kaontinay miaraka amin'ireo angon-drakitra rehetra notahirizinay tao anatin'izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Voampanga farany noho ny halatra ny sarin'ireo olo-malaza iCloud voaheloka higadra 8 volana
Ny Apple Watch Series 4 dia hanana vahaolana 384x 480p
Ny serivisy horonan-tsarimihetsika Apple dia mety hitombo haingana